Manhajka & Akhriska - Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale
Ubucda Dugsiyada Aagga Robbinsdale waa falsafadda Arag Dhammaan, U Adeegso Dhammaan, Taageer Dhammaan! Dugsiyadeenna hoose waxay bixiyaan waxbarasho aasaasi ah oo loogu talagalay ardayda iyadoo lagu saleynayo heerarka tacliimeed ee gobolka Minnesota. Aasaaskan waxaa loogu talagalay ujeeddo ahaan loogu talagalay inay bixiso barashada dhinacyada tacliinta iyo shucuurta bulshada taas oo u diyaarin doonta ardayda inay noqdaan xirfad, xirfado xirfad leh iyo kulleej diyaarsan.
Waxaan soo dhaweyneynaa barida iyo barashada dhaqan ahaan laxiriira waxaanan ku dadaalaynaa inaan u abuurno ardaydeena khibrado barasho oo sax ah halkaasoo ay iskaga arki karaan barashada isla markaana dareemayaan awood siinta inay waxbartaan inta ugu badan ee ay awoodaan si ay aduunyada uga dhigto meel wanaagsan.
Ardaydeenna hoose waxay helaan waxbarasho:
Akhris iyo Qoraal Luqadeed
Muusikada iyo Fanka
Warbaahinta iyo Teknolojiyada
Qaabdhismeedka Wax Akhriska iyo Qoraalka
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay u adeegsadaan qaabdhismeedka isu-dheellitirka akhris-qorista ee hirgelinta barashada akhris-qorista. Isku-dheelitirnaanta Akhriska iyo Qoraalka waxaa lagu muujiyaa mabaadi'da soo socota:
Siideynta Mas'uuliyadda tartiib tartiib ah waxay u oggolaaneysaa macallimiinta inay si tartiib ah oo miyir leh u sii daayaan mas'uuliyad dheeraad ah oo ku saabsan barashada Ardayda.
Si cad, tilmaam nidaamsan ee xirfadaha akhris-qorista aasaasiga ah ayaa muhiim ah. Barista fahamka waa inay ahaato hadafka koowaad Macallimiintu waxay hirgelin doonaan tilmaam qayaxan oo lagu qaabeeyo fikirkooda Socodsiiya cod dheer.
Ardaydu waxay sida ugu fiican wax ku bartaan wada shaqeynta iyo la hadalka dadka kale.
Xirfadaha waa in lagu baraa macnaha guud, iyada oo qayb ka ah dhacdooyinka akhris-qorista ee khuseeya iyada oo loo marayo qoraallada dhaqan ahaan la xiriira.
Waxbarista kaladuwan iyo barashada udub dhexaadka ardayda waxay sare u qaadeysaa awooda macalimiinta si ay ugu adeegaan ardayda oo dhan waxna uga qabtaan baahiyaha shaqsiga
Qiimaynta tilmaanta awooda iyo sidoo kale baahiyaha, kuna lug leh ardayda go'aan ka gaadhida waxa u gaarka ah barashada.
Ujeedada qiimeyntu waa in la ogeysiiyo lana qaabeeyo waxbarista.
Ardaydu waxay u baahan yihiin marin u helida qoraallo xiiso leh iyo xulasho.
Waxbarista akhris-qorista ee tayada leh waxay dhistaa xirfad iyo rabitaan ah in la akhriyo agabyada sii murugsan ee sii kordhaya.
Ardaydu waxay u baahan yihiin buugaag kala duwan iyo waxyaabo kale oo akhris ah fasallada ay ku jiraan iyo iskuulka iyo Maktabadaha bulshada.
Macallimiintu waa inay fahmaan waxyaabaha laga filayo kakanaanta qoraalka.
Qoraalka iyo akhrisku waxay leeyihiin saameyn togan oo is-dhaafsi ah.
Xiriirinta akhriska iyo qoraalka si looga faa'iideysto isdhaafsiga dabiiciga ah ee udhaxeeya akhriska iyo geeddi socodka luqadaha kaladuwan .
Ardayda qaar waxay ubaahan yahiin barasho dheeri ah oo xeel dheer hadii ay ilaalinayaan xawaaraha horumarka Taas oo loo barbardhigi karo asaaggooda.
Yoolalka iyo Himilooyinka Barnaamijka
Akhriska Wanaagsan ee Fasalka 3aad waa qayb ka mid ah dadaalkeenna dhammaystiran ee ku aaddan ujeedkeenna oo ah in dhammaan ardayda la helo si karti leh u akhrinta dhamaadka fasalka saddexaad. Barashada FastBridge waxay bixisaa qiimeyn Akhriska iyo Akhriska Hore si loo cabbiro akhrinta akhriska iyo xirfadaha akhriska hore.
Qorshaha Akhriska, 2019-2020
Macallimiinteena dugsiga hoose waxay u adeegsadaan khariidad manhaj degmada oo dhan ah hage si ay u taageeraan waxbarista qorshaynta sannad dugsiyeedka. Heerka fasalka, mowduucyada, fikradaha waaweyn iyo halbeegyada ayaa loo qaabeeyey inay yihiin isku xigxiga baris barasho ee sanad dugsiyeedka. Marka lagu daro khariidadeynta sanadka oo dhan, waxaa loo qaabeeyey si qumman si loo taageero maadooyinka isku dhafan ee maadooyinka.
Luqadda Muhiimka u ah Macallimiinta Akhriska iyo Higaadda (LETRS)
Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay u adeegsadaan Muhiimadda Luqadda ee loogu talagalay Macallimiinta Akhriska iyo Higaadda (LETRS), oo ah qaab barasho loogu talagalay barashada akhriska iyo qoraalka LETRS waxay bixisaa cilmi-baarista muhiimka ah ee akhriska Waxbarida koox-debecsan iyo akhris-qorista dhammaan qaybaha mawduucyada waxay taageertaa koritaanka ardayda laga bilaabo dugsiga barbaarinta illaa fasalka laba iyo tobnaad. Qaab-dhismeedka aqris-qorista ee aan u adeegsano Charlotte Danielson Qaab-dhismeedka Wax-ku-oolnimada Waxbaridda waxay ka caawisaa shaqaalaha waxbaridda inay adeegsadaan luqad guud iyo faham si ay u kaxeeyaan xogta ku saleysan, habka ugu wanaagsan ee waxbarista. Codka jamhuuriyadda soomaaliya
Aqoon isweydaarsi Benchmark
Benchmark Workshop khayraadka manhajka waxay taageertaa qaab ka jawaabaya awooda ardayda iyo baahiyahooda. Macallimiintu waxay ka soo qaataan qaybo ka mid ah akhriska iyo qoraalka shan qaybood si ay u taageeraan waxbarashadooda: aqoon isweydaarsiga akhristaha, aqoon isweydaarsiga qoraaga, codbixinta iyo aqoon isweydaarsiga ereyada, tikniyoolajiyadda iyo horumarinta xirfadda.
Talo bixintaani waxay ka dhalatay geedi socod dhameystiran, oo ay kujirto la macaamilidda (iyo talo ka raadinta) daneeyayaasha ku baahsan degmadeena. Nidaamka talo soo jeedinta wada shaqeynta ah waxaa sidoo kale ka mid ahaa jawaab celinta iyo ka soo dhiibashada macallimiinta, qoysaska, ardayda iyo shaqaalaha ka socda bulshada Dugsiyada Aagga Robbinsdale. Taladu waxay ahayd mid iswaafaqsan dhammaan kooxaha daneeyayaasha.
Waxyaabaha ugu Muhiimsan ee Aqoon isweydaarsiga Benchmark waxaa ka mid ah:
Tilmaamaha codbixinta oo ku saleysan cilmi baarista Wiley Blevins (Fiiri Fiican ee Codadka)
Qalabka jawaabta ee baahiyaha wax ka qabadka
Qoraallo sax ah oo ay ku jiraan qoraallo ku saabsan ama ay qoreen Dhaladka Mareykanka ee ka yimid Minnesota
Xiriir toos ah oo lala yeesho qaabdhismeedka Isku-dheelitirka Akhriska iyo Qoraalka ee Dugsiyada Robbinsdale oo leh tilmaamo cad iyo taageero ilaha
Cutubyada "Bilaabashada" ee bilawga sanadka ah si loo dejiyo howlo joogto ah iyo cibaado, lana jaan qaada Tiirka Diirada Dugsiyada Ammaan iyo Madaniga ah
Kheyraadka sinnaanta ee Isbaanishka
Qalab macallimiin oo lagu taageerayo barashada qorista iyo akhriska qorista iyo qorista
Qorshaha Dyslexia ee Degmada
Waxaan garwaaqsan nahay muhiimadda ay leedahay baaritaanka ardayda dugsiga hoose sannad kasta si loo aqoonsado dhibaatooyinka akhriska. Tallaabooyinka baaritaanka waxay muujinayaan haddii ardaydu leeyihiin ama aysan helin xirfado akhris heer-fasal. Haddii xirfadaha la filayo aan la aasaasin, waxaan ku howlan nahay go'aan qaadasho taas oo ay ka mid tahay aruurinta xog qiimeyn dheeri ah oo u oggolaaneysa macallimiinta inay la jaanqaadaan waxbarista iyo baahida loo aqoonsaday. Intaas ka dib, koritaanka ardayga waa lala socdaa inta ay socoto barashada.
Dugsiyada Aagga Robbinsdale si rasmi ah uma soo ogaadaan cilladda dyslexia. Nidaamkeenna baaritaanka iyo kormeerka horumarka socda ee waxqabadka ardayga wuxuu na siinayaa macluumaadka aan u baahannahay si aan u aqoonsanno xirfadaha akhriska ee ka maqan ama aan si hoose u horumarin ee la xiriira dyslexia waxayna gacan ka geysataa naqshadeynta iyo hirgelinta isku habboonaanta waxbaridda ee ku habboon horumarinta xirfadahaas. Haddii ardaygaagu ka helay cillad disklexia hay'ad ka baxsan, fadlan u sheeg macallinka fasalka ardaygaaga. Macluumaadkani wuxuu ka caawin doonaa macallinka dejinta qorshe habboon oo ku saabsan taageerada waxbarashada. Qorshaha waxaa ku jiri kara taageero waxbarasho oo dheeri ah fasalka dhexdiisa, isagoo ku kordhinaya taageerada mid ka mid ah barnaamijyadeena aqrinta dheeriga ah ama qiimeyn dheeraad ah si loo fahmo baahida waxbarasho. Wadahadalka Macallinka iyo Qoyska waa qayb muhiim u ah hawshan.
Dugsiyada Hoose ee Jaleecada
Farshaxanka Luuqadda Ingiriiska (ELA)
Caafimaadka iyo Barashada Jirka
Minnesota waxay qaadatay Istaandarada Gobolka ee Muhiimka ah (CCSS) ee Farshaxanka Luqadda Ingiriisiga (ELA) - iyadoo lagu daray aqoon muhiim ah iyo xirfado loo arko inay muhiim u yihiin waxbarashada sare iyo ka shaqeynta dhaqaalaha adduunka ee qarnigii labaatanaad. Marka la eego aasaaskan adag ee heerarka, ardayda Minnesota waxay si fiican ugu qalabaysan yihiin xirfadaha akhris-qorista ee looga baahan yahay guusha kuleejka, xirfado xirfadeed oo qeexan, shaqooyin iyo ka-qaybgal firfircoon nolosha bulshada.
Heerarka Minnesota K-12 ELA waxaa ka mid ah
hadalka, daawashada iyo dhageysiga
Degmadeena, xanaanada kahor ilaa fasalka 5aad waxay diirada saaraan shanta qaybood ee aqriska oo ay kamid yihiin: wacyiga dhawaaqa, dhawaqa, fahamka, erayada iyo kuqanacsanaanta. Jaangooyooyinka laga bilaabo fasalka barbaarinta illaa fasalka 12aad waxay ku darayaan rajada laga qabo in dhammaan ardayda ay aqriyaan shaqooyinka ay qabanayaan iyo waxa ku saabsan qabiilooyinka Hindida Mareykanka ee ka soo jeeda Minnesota.
Ka baro waxbadan oo ku saabsan Heerarka Gobolka Minnesota ee Farshaxanka Luqadda Ingiriiska websaydhka Waaxda Waxbarashada ee Minnesota.
Fahamka qotada dheer ee xisaabta, iyo awooda lagu dabakhi karo fahankaas nolol maalmeedka iyo mustaqbal aan wali la maleyn, ayaa ka muhiimsan sidii waligii ahaan jirtay. Dugsiyada Xaafada Robbinsdale waxaa ka go'an inay u fidiyaan jawi barasho kaqeybgal iyo horumar ku habboon ardaygaaga si uu u barto inuu jeclaado xisaabta.
Ardayda Robbinsdale Area Schools waxay:
helitaan iyo adeegsi matalaad xisaabeed dhammaan noocyada barashada xisaabta
ku lug lahaado hadal macno leh
lagu waydiiyo su'aalo ujeedo leh Qoto-dheerida Aqoonta
ka dhisto habsami u socodka fahamka fikradda
ku hawlan halgan wax soo saar leh barashada fikradaha xisaabta
leeyihiin fikirkooda u gaarka ah ee loo adeegsado barashada fikradaha xisaabta.
Laga soo bilaabo iskaashatada, kooxaha barashada ku saleysan su'aalaha ilaa in ka badan 20 oo isku xigxigta oo kala duwan oo loogu talagalay ardayda fasalka lixaad si loo qoondeeyo dariiqa loo maro AP-Calculus sanadka ugu dambeeya, degmadeena ayaa bedeleysa wajiga barashada xisaabta si loo hubiyo in ardayda ay ku fiicnaadaan xirfadaha ay u baahan yihiin si aad ugu guuleysato kuleejka iyo goobta shaqada.
Ka baro waxbadan oo ku saabsan Heerarka Xisaabta Gobolka Minnesota bogga internetka ee Waaxda Waxbarashada ee Minnesota.
Waxa ay sheegaan waa run - waxa kaliya ee joogtada ahi waa isbadal - mana jirto meel uga cad cad sayniska. Xaddiga helitaanka cusub iyo soo-saarista aaladaha cusub waxay waxbarashada sayniska ka dhigayaan maado si dhakhso leh isu beddelaysa. Dugsiyada Robbinsdale Area waxay ku faantaa inay horumariso muhiim, weydiiso saynisyahano da 'yar oo u adeegsada xiisaha dabiiciga ah inay qiimeeyaan, ka fekeraan kana shaqeeyaan sidii loo fahmi lahaa ifafaalaha dabiiciga ah iyo saameynta ay ku leeyihiin xilligan iyo mustaqbalka. Dheeraad ah, ardaydu waxay bartaan waxa kaliya ee joogtada ah, dhab ahaantii, isbeddel iyo caddayn cusub ayaa u keeni kara iftiin cusub aragtiyaha la aasaasay. Waa waqti xiise leh inaad noqoto arday saynis!
Ka baro waxbadan oo ku saabsan Heerarka Sayniska ee Gobolka Minnesota bogga internetka ee Waaxda Waxbarashada ee Minnesota.
Ujeedada koowaad ee waxbarashada cilmiga bulshada ayaa ah, sida laga soo xigtay Golaha Qaranka ee Daraasaadka Bulshada, "... in laga caawiyo dhalinyarada inay gaaraan go'aano xog-ogaal ah oo caqli-gal ah oo danta guud ah muwaadin ahaan bulsho dhaqameed kala duwan, bulsho dimuqraadi ah adduun isku tiirsan."
Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxaa ka go'an inay ka caawiyaan arday kasta inuu noqdo mid wax soo saar leh, oo wax ku biiriya xubnaha magaalo, gobol, dal iyo bulshada adduunka. Barashada cilmiga bulshada ee hodanka ah oo lagu dhexwarey, iyo lagaarey, dhamaan meelaha kale ee nuxurka leh waxay ka caawineysaa hubinta natiijadaas.
Ka baro waxbadan oo ku saabsan Heerarka Daraasaadka Bulshada ee Gobolka Minnesota bogga internetka ee Waaxda Waxbarashada ee Minnesota.
Degmadeena waxay ku dadaaleysaa inay ka caawiso ardaydeena inay horumariyaan qadarinta muusikada. Ardayda dhigata fasalka barbaarinta carruurta ilaa fasalka 5aad waxay helaan tilmaam muusig oo ay barayaan khuburo xagga muusigga ah oo ruqsad haysta. Waxay kuxirantahay iskuulka, ardaydu waxay fursad uhelaan inay sahamiyaan oo ay bartaan sida loo ciyaaro aaladaha kala duwan sida xylophones, rikoorro, ukuleles, qalabka tumida iyo waxyaabo kaloo badan.
Barnaamijkeena muusiga ee aasaasiga ah wuxuu soo bandhigayaa fursado hees, dhaqdhaqaaq iyo bandhig heer fasal ah. Ardaydu waxay bilaabi karaan barashada aaladda muusikada fasalka 4aad iyo aaladda muusikada ee Fasalka 5aad.
Ardayda dhigata fasalka barbaarinta carruurta ilaa fasalka 5aad waxay helaan tilmaam farshaxan oo ay barayaan khuburo farshaxanno ruqsad haysta ah. Ardaydu waxay fursad u leeyihiin inay sahamiyaan farshaxanno kala duwan, xilliyada / dhaqdhaqaaqyada / qaababka iyo farshaxanno. Barnaamijkeena farshaxanka aasaasiga ah wuxuu ka kooban yahay laba bandhig faneed degmada oo dhan sanadkiiba kuwaas oo loo dooran karo shaqada ardayda.
Ka baro waxbadan oo ku saabsan Heerarka Farshaxanka Fiican ee Gobolka Minnesota bogga internetka ee Waaxda Waxbarashada ee Minnesota.
Ujeedada caafimaadka iyo jimicsiga ee Dugsiyada Robbinsdale Area waa in la siiyo fursado wax barasho taas oo ka caawinaysa ardaydeena inay gaaraan caafimaadka ugu fiican ayna yareeyaan dabeecadaha caafimaad ee xun. Waxaan bixinaa waxbarid dhameystiran iyo horumar ku habboon iyo barasho si wax looga qabto dhinacyada jirka, maskaxda, shucuurta iyo bulshada ee caafimaadka. Ardaydu waxay ku dabaqi karaan waxbarashadooda nolosha dhabta ah, isdhexgalka maalin kasta - gudaha iyo dibaddaba - inta noloshooda ka hartay.
Waxbadan ka baro Heerarka Gobolka Minnesota ee Caafimaadka iyo Waxbarashada Jirka bogga Websaydhada Waxbarashada ee Minnesota.
Ardaydeena waxay horumariyaan qadarinta aduunka hareerahayaga ah waxayna fahmayaan muhiimada ay leedahay in si togan wax loogu biiriyo bulshadeena. Dugsiyada Aagga Robbinsdale, ardaydu waxay leeyihiin fursado ay ku bartaan kuna tababaraan xirfadaha luqadda adduunka. Qaar badan oo ka mid ah fasaladayada farshaxanka ee aasaasiga ah waxay ku daraan muusikada dhaqamada iyo luqadaha kale.
Ardayda barata luqadaha cusub waxay si fiican ugu shaqeeyaan xisaabta iyo Ingiriisiga, iyo imtixaannada gelitaanka kuleejka. Dheeraad ah, ku noqoshada luqad labaad waxay si weyn u caawin doontaa ardayda markay soo galaan suuqa shaqada, iyo sidoo kale waxay siisaa waxbarasho qiimo leh dhaqamada kale - barashada ku saabsan bulshada cusub qaybta ugu muhiimsan ee luqadda iyo isgaarsiinta.
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay bixiyaan waxbarid Isbaanish ah oo laga bixiyo seddex dugsi hoose:
Dugsiga Hoose ee Lakeview, oo qayb ka ah Barnaamijka Sanadaha Aasaasiga ah ee Baccalaureate
Dugsiga Hoose ee Northport, Barnaamijka Labada Luuqad ee Luuqadda
Dugsiga dhexe iyo dugsiga sare, waxaan bixinaa barashada luuqadaha Faransiiska iyo Isbaanishka. Intaa waxaa dheer, Dugsiga Sare ee Robbinsdale Cooper wuxuu bixiyaa barashada luqadda Ojibwe ee Fasalka 11-aad. Ku noqoshada aqoon luqad labaad ayaa macno wanaagsan samaynaysa - iyada oo aan lagu xusin waa shardi inta badan kulleejooyinka afarta sano ah iyo jaamacadaha!
Heerka Fasalka Hoose ee Jaleeco
Xanaanada caruurta waa sanad kumeelgaar ah oo udhaxeysa caruurnimada hore iyo waxbarashada rasmiga ee ardayga. Ardayda shaqsiyeed waxay yimaadaan xanaanada iyaga oo leh habab kala duwan oo xagga waxbarashada ah, waxayna leeyihiin heerar aqoon iyo xirfado kala duwan. Xannaanadu waxay ardayda siisaa fursad ay ku koraan kuna horumariyaan ciyaarta - habka ay carruurtu sida ugu fiican wax ugu bartaan. Waa wakhti ay ardaydu ballaadhiyaan jacaylka ay u qabaan wax-barashada, dhisaan aqoonta, kobciyaan awooddooda la-dhaqanka dadka kale iyo inay sahamiyaan siyaabaha ay adduunka ku gaadhaan.
Macallimiinteennu waxay ku dhisaan xoogga ardayda ay u keenaan deegaanka xanaanada - oo ay ku jiraan aqoontooda, xirfadahooda tacliimeed iyo bulsho-shucuur, xiisaha, sooyaal dhaqameed iyo luqadeed, iyo khibradaha waxbarasho ee hore.
Heerarka Waxbarashada MN: Xanaanada Carruurta
Fasalka koowaad waxaa ka buuxa kala-guuryo muhiim ah oo xiiso leh iyadoo ardaydu ay ka tagayaan in badan oo ka mid ah ciyaartii dugsiga xannaanada iyo barbaarinta carruurta, ayna billaabeen inay horumariyaan xirfado aqooneed iyo bulsho-shucuureed oo badan. Barashada akhriska waa guul muhiim u ah Fasalka 1aad. Ardaydu waxay ku faraxsan yihiin barashada oo dabiiciyan waa bulsho. Adeegsiga fursadaha wada hadalka ee fasalka dhexdiisa waxay ardayda ka caawisaa habeynta iyo barashada waxyaabaha cusub.
Fasalka 2aad, ardaydu waxay noqdaan aqoonyahano khibrad badan iyagoo kudhaqma xirfadahooda siyaabo aad uqurux badan oo dhameystiran. Ardaydu waxay ku kobcaan nolol maalmeedka la saadaalin karo iyo shaqada lammaanaha. Wadahadalku waa habab lagu farsameeyo barashada laguna kordhiyo barashada.
Fasalka 3aad, ardaydu waxay ka gudbaan barashada xirfadaha aasaasiga ah si ay ula qabsadaan una gudbaan inay horumariyaan xirfado aad u adag. Ardaydu waxay ka faa'iideystaan ka shaqeynta kooxaha waaweyn ee waxbarashada, iyo kobcinta doodahooda, dhageysiga iyo xirfadaha milicsiga. Ardayda fasalka seddexaad waxay diiradda saari karaan, soona saari karaan, habab iyo wax soo saar labadaba si guul leh.
Fasalka 4-aad, ardaydu waxay ku fikiri doonaan, falanqeyn doonaan oo wax ku baran doonaan qaabab ka casrisan oo qaabeysan marka loo eego fasallada koowaad (K-3). Waxay baran doonaan sida loo sameeyo isku xirnaanta walxaha cusub iyo inay fahmaan fikradaha murugsan ee maadooyinka oo dhan siyaabo ay ka mid yihiin ku dabakhidda aqoontooda aasaasiga ah adduunka ku xeeran. Ardayda fasalka afaraad waxay diiradda saaraan arrimaha bulshada iyo mowduucyada waaweyn ee adduunka xagga barashada iyo wadahadalka asxaabta.
Fasalka 5-aad waa wakhti aad muhiim ugu ah ardayda si ay u xoojiyaan xirfadaha ay ka heleen fasalka 4-aad ayna u dhigaan aasaas adag sanadaha soo socda. Sannadkan wuxuu ku saabsan yahay ka caawinta ardayda barashada, turxaan bixinta iyo kobcinta xirfadahooda. Shaqadooda, ardaydu waxay bilaabi doonaan inay ku dabaqaan aqoontooda oo ay adeegsadaan xirfado aan la taaban karin si ay u noqdaan madax bannaani iyo mufakiriin muhiim ah. Dooda iyo doodaha xiisaha leh waxay taageeraan horumarka ardayda ee sax iyo qalad, iyo xirfadaha xalinta khilaafaadka.